ကြော်ငြာကဏ္ဍ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 4
(ကံ ဉာဏ် ၀ီရိယ) ၀မ်းမြန်မာကွန်မြူနီတီ မြန်မာစာပေဟောပြောပွဲ ဆန်းဒေး ကျင်းပမည် ဓမ္မဘေရီ (အရှင်ဝီရိယ)၊ ကံထွန်းသစ် (အရှင်ဇာဂရ)၊ ဉာဏ်ဦးမောင် (အရှင်ဉာဏိကာဘိဝံသ) (မိုးမခကြော်ငြာ) သြဂုတ် ၂၂၊ ၂၀၁၅ လာမယ့် သြဂုတ်လ...
၈လေးလုံး အရေးတော်ပုံ ၂၇ နှစ်ပြည့် အခမ်းအနား ဖိတ်ကြားလွှာ (မိုးမခ) သြဂုတ် ၈၊ ၂၀၁၅ ရန်ကုန်အချိန် – မနက်ဖြန်မှာ ကျင်းပမယ့် (၂၇) နှစ်မြောက် ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံ အခမ်းအနား နှင့်...
နယူးယောက် ဘတ်ဖဲလိုးမြို့ြ့မန်မာဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများ ရှစ်လေးလုံး ၂၇ နှစ်ပြည့် အလံတင်အခမ်းအနား ကျင်းပမည် (မိုးမခ) သြဂုတ် ၇၊ ၂၀၁၅ နယူးယောက်ပြည်နယ် ဘတ်ဖလိုးမြို့ရောက် မြန်မာနိုင်ငံသား ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုများမှ နှစ်စဉ်ကျင်းပသော ၆...
မြန်မာရေဘေးသင့် ပြည်သူများ ကူညီရေး ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာမြန်မာမိသားစုများ၏ အသက်ဆက်ရောင်ခြည် ဈေးရောင်းပွဲ (သြဂုတ် ၉၊ ဆန်းဒေး) Tags: ဆန်ဖရန် Related posts နွယ်ခွေ –...
Hornbill (အောက်ချင်းငှက်)- ဘေးဧရိယာရဲ့ ပထမဦးဆုံး ချင်းအမျိုးသမီး ဖွင့်လိုက်တဲ့ မြန်မာ-ထိုင်း စားသောက်ဆိုင် (မိုးမခကြော်ငြာ) ဇူလိုင် ၁၅၊ ၂၀၁၅ Hornbill – Burmese, Thai Restaurant မြန်မာလိုဆိုရင်တော့...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၇၀ ပြည့် မွေးနေ့ဂုဏ်ပြုကြမည် မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ ဇွန် ၁၈၊ ၂၀၁၅ (လက်ခံရရှိသော ဖိတ်စာကို တင်ဆက်လိုက်ပါသည်) No tags for this post. Related posts No...
ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာမြန်မာမိသားစုများက မြန်မာအကြမ်းဖက်အစိုးရကို ကန့်ကွက်ရှုံ့ချမည် (မိုးမခ) မတ် ၁၂၊ ၂၀၁၅ ဘေးဧရိယာရှိ မြန်မာမိသားစုဝင်များ ခင်ဗျား … မတ်လ ၁၀ရက်နေ့က ပဲခူးတိုင်း၊ လက်ပံတန်းမြို့တွင် မြန်မာပြည်တွင်း အမျိုးသားပညာရေး စနစ် ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် အတွက် ငြိမ်းချမ်းစွာ...
အကြမ်းဖက်မှုကို ကန့်ကွက်ခြင်းနှင့် ဖမ်းဆီးခံ ကျောင်းသားများ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) တွင် ဆန္ဒထုတ်ဖော် တောင်းဆိုမည်ဟု ဖိတ်ကြား (မိုးမခ) မတ် ၁၁၊ ၂၀၁၅ မတ်လ ၁၂ ကြာသာပတေးနေ့...
နယူးယောက်မြို့တော် မြန်မာမိသားစုများ မြန်မာအကြမ်းဖက်အစိုးရကို ကန့်ကွက်ရှုံ့ချမည် (မိုးမခ) မတ် ၁၁၊ ၂၀၁၅ ဖိတ်ကြားလွှာမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ “ဒီမိုကရေစီပညာရေးသပိတ်မှောက် ကျောင်းသားများအား ထောက်ခံခြင်းနှင့် မြန်မာအစိုးရ၏ အကြမ်းဖက်မှုများကို ရှုံ့ချခြင်း” နယူးယောက်မြန်မာနိုင်ငံလူမျိုးစုများမှ “၂၇...
ကျော်ဟုန်းရဲ့ အက်စစ်ပြင်းထဲက ရွှေ အမေရိကားနှင့် ကနေဒါသို့ ဖြန့်ချိလိုက်ပြီ မိုးမခ ။ ။ မတ် ၂၊ ၂၀၁၅ ကဗျာဆရာ ကျော်ဟုန်းရဲ့ အက်စစ်ပြင်းထဲက ရွှေ ကဗျာစာအုပ်ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ကနေဒါ...
မေရီလန်းမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှစ် ၁၀၀ပြည့် ကျင်းပမည် (မိုးမခကြော်ငြာ) ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ၊ ၂၀၁၅ ☆ GENERAL AUNG SAN CENTENARY ☆ ☆ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှစ်တစ်ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား...
ချင်းသာသနပါလက ဟောပြောပွဲ ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ကျင်းပမည် (မိုးမခကြော်ညာ) ဇန်န၀ါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၅ No tags for this post. Related posts No...
ဗိုလ်ချုပ် နှစ် ၁၀၀ ပြည့် နယူးဇီလန် မြန်မာမိသားစုများ စုဝေးကျင်းပမည် (မိုးမခ ကြော်ငြာ) ဇန်န၀ါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၅ ကျနော်တို့ရဲ့ကမ်းဝေကြိုးကြာလို့အမည်ရတဲ့ စာပေအနုပညာအင်အားစုလေးက ပထမအကြိမ်ထုတ်ဝေမှုအနေနဲ့ကမ်းဝေးကြိုးကြာဂျာနယ်ကို နယူးဇီလန်မှာရောက်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းဖတ်နိုင်ဖို့ ထုတ်ဝေဖြန့်ချိပြီး(Free...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှစ် ၁၀၀ ပြည့် နဲ့ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြန်မာတိုင်းရင်းသားမိသားစုများ (မုိုးမခကြော်ငြာ) ဇန်န၀ါရီ ၁၉ ၊ ၂၀၁၅ Tags: ဆန်ဖရန် Related posts နွယ်ခွေ – မေတ္တာနန္ဒစာသင်ကျောင်းက အပြန်...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှစ် ၁၀၀ ပြည့် အခမ်းအနား ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတို့ ကျင်းပမည် (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၅ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့၊ ဘေးဧရိယာ၊ နယူအပ် ခန်းမဆောင်တွင်...
BOGYOKE (GENERAL) AUNG SAN 100 YEARS CELEBRATION MUSIC PERFORMANCE ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ် ဖျော်ဖြေပွဲ နှင့် မြန်မာအစားအစာပွဲတော် (နယူးယောက်မြို့တော်) (မိုးမခကြော်ငြာ) ဇန်န၀ါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၅...
(မိုးမခ) – နတ်မောက်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှစ် ၁၀၀ ပြည့် မဂ္ဂဇင်း ထုတ်ဝေရေး စာအုပ်အလှူ ထည့်ဝင်နိုင်
(မိုးမခ) – နတ်မောက်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှစ် ၁၀၀ ပြည့် မဂ္ဂဇင်း ထုတ်ဝေရေး စာအုပ်အလှူ ထည့်ဝင်နိုင် ဇန်န၀ါရီ ၅၊ ၂၀၁၅ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ(၁၃)ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့်...
ကာတွန်းဆရာကြီးများအား ကန်တော့မည် (မိုးမခကြော်ငြာ) ဒီဇင်ဘာ ၂၊ ၂၀၁၅ No tags for this post. Related posts No related posts.
RIT Friends – 84 – 93 ဒီဇင်ဘာ မိတ်ဆုံပွဲ ဖိတ်ကြားနှိုးဆော်လွှာ (မိုးမခကြော်ငြာ) ဒီဇင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၄ No tags for this post. Related...
အဓိဌာန်ဆရာတော်၏ ရန်အောင်ချမ်းသာဘုရားကြီး၊ နေပြည်တော် (မိုးမခကြော်ငြာကဏ္ဍ)၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၄ No tags for this post. Related posts No related posts.